UGeiger kanye nokubuyela kwakhe
Ngenxa yobuhle, ukungahloniphi okuhlobene nomphumela wokuhlobisa isikhathi eside, i-rhizome zisetshenziswa - i-Geiger, kanye no-Tiaarka no-Geicherla, eduze kwayo, bathole ukuthandwa okungavamile phakathi kwabantu abahlobisa. Ngomnyaka we-thirties, ubukhulu begama labo babhekana nezinhlobonhlobo ezinhle ze-geicher, futhi maduzane benza imfashini futhi baba i-ornamentalist ethandwa kakhulu. Nakuba izimbali ezinhle ziqhubeka nokuthuthukisa, kunezinto ezintsha ezimangalisayo.
I-Geicher (Heuchera) ne-tiarka (Tiarella) bangabomndeni we-saxifrage (i-Saxifragaceae). Izwe lakubo iNyakatho Melika. I-Geichella (i-X Neicherella) i-hybrid etholakala ngobuciko phakathi kwamabili okuqala.
Ama-geichers anamaqabunga amancane, anesikhumba, ama-petioled eside kuma rosette rosettes awo. Ukukhula, amahlumela afinyelela ububanzi kuze kufike ku-60 cm. Izimbali zincane, ezinama-panicles avulekile kuma-pedoncles ama-40-60 cm aphakeme, ezinhlotsheni ezithile eziseduze nemitha. Izimbali ngoJuni, abagijimi bahlala behlobisa yonke inkathi - amaqabunga abo amahle nge-lobes azungezile noma akhonjiwe aphile ngaphansi kweqhwa futhi ahlale kuze kube entwasahlobo. Bese kancane kancane bashintshwa yizintsha.
Inani eliphelele lezinhlobo ze-Geicher manje selidlulile 200. Abadwebi bebhanki nabadizazidi bayakwazisa izimbali ngezinyawo ezide (kuze kube ngu-90 cm) - I-Florist Ukukhetha ngamagqabi aluhlaza kanye nezimbali ze-coral-pink, i-Silver Lode ne-Shamrock enezimbali ezimhlophe, u-Regina ngamaqabunga anesiliva nezimbali ze-pink, kanye ne-cylindrical. Esikhathini esizayo esiseduze, singalindela ukuvela kweqembu lonke lezinto ezintsha ezifanayo.
Ngendlela, izaveli zalesikhathi zikhangayo kakhulu. Izazi ze-geochemists ze-Amethyst Mist Coral Bells zigcwele amaqabunga amhlophe agcoke ama-violet, okubonakala sengathi agcwele umbukiso wesiliva ogqamile. Ukuphakama kwesitshalo kungama-20-25 cm.
Esiqhingini seLime Riki, amaqabunga aluhlaza obumnyama abomvu agqoke umqhele we-lace cream-izimbali ezimhlophe. Izimbali - engxenyeni yokuqala yehlobo amaviki ambalwa. I-peduncles ifinyelela ukuphakama kwama-60-65 cm.
I-Geichers Peach Flamb ne-Obsidian inephethini eliphuzi eliphuzi elinomfanekiso obomvu.
Manje ama-hybridizers baphishekela umgomo owodwa - ukuhlanganiswa nobukhazikhazi behlathi. Uchungechunge lwe-geyher okuthiwa "isikhala" - Venus, Mars, Neptune, Mercury, Saturn - amaqabunga amakhulu amaqabunga e-petioles amafushane.
Elinye lamaqembu athandwa kakhulu yi-Geiger American hybrids (N. x americana). Zihlukaniswa ngamahlamvu angavamile ngokumangalisayo - obomvu, obomvu, ophuzi ngisho no-orange, onemibala enemibala evelele, enezivunguvungu, ezinama-claws e-silvery, nge-wavy namaphethelo aqine kakhulu.
Muva nje, izinhlobo ezintsha ze-geicher zisetshenziselwe ukuchithwa: ama-N. pubescens amakhulu-anamanzi, anqande ukumelana nesomiso futhi angabandeki, uN.-ebusika kakhulu-N. ichardsonii, omncane uN. pulchella H. hallii, i-winter max-hardy, kodwa i-flower max.
Izinhlobo ezinhlobonhlobo, ikakhulukazi ngamaqabunga aluhlaza, izimbali ezimhlophe, umbala omhlophe we-coral, kanye namaqabunga amaningi okuhlobisa - amaqabunga amhlophe namakha ayisikhilimu, atholakala ekubomvu wegazi we-geysher (iHsanguinea). Inemibala ebomvu kakhulu ebomvu, kodwa isikhathi sezimbali sincanyana kunaleyo yezinhlamvu.
Lezi zihlobo eziseduze zikaGeicher zisaziwa kakhulu ngabalimi bethu be-amateur, kodwa ubuhle bazo obuhle abukashiyi muntu. Izithelo ze-tiarkas ezihlotshaniswayo zigcinwa kulo lonke ihlobo - entwasahlobo zihlotshiswe kakhulu ngamakholomu amhlophe noma ama-pink inflorescence amhlophe, bese kuthi kuze kube sebusika - ngezinhlobo ezihlukahlukene zamaqabunga efomini nombala, okwamanye ama-tiarok afana namaqabunga e-Geicher, nakwabanye - i-maple yokusika ngomunwe. Ngama-tiarok ngokujwayelekile, kukhona iphethini elibomvu, elimnyama noma elimnyama kakhulu kuwo wonke umvuthwandaba obheke ngemuva kwekhasi elihlaza. Ezinhlobonhlobo eziningi, izimbali zinephunga elimnandi kakhulu, eliqinile ngokwanele. Amanye amaqabunga ashintsha umbala wabo kusuka efrijini futhi abe ngophephu, obomvu, obomvu obomvu, kubonakala emangalisayo ekuqaleni kwentwasahlobo. Kunamafomu amaningi engadini kanye nenhlawulo:
I-Geichella (i-X Heucherella)
Izimbali ziqala ngoMeyi kanti ngezinye izikhathi ziyaqhubeka kuze kube sekuwa, njengoba izimbali zingenayo. Ukuphakama - 20-45 cm. Kunezinhlobo ezimbalwa zezinga eliphezulu. Le nkathi entsha ibonakale - I-Stolopite enamahlamvu ahle kakhulu egolide-aphuzi-aluhlaza, egcwele amabala abomvu obomvu. Ukuphakama kwesitshalo yi-60-65 cm.
Ukunakeka kulula - akukho ama-whims
I-Geicher, i-tiarki ne-geichella yizitshalo zasebusika-eziqinile. Iningi labo livame ukuzizwa liphakathi kweqembu, izinhlobo ezithile ezintsha zithwala iqhwa ngaphansi kweqhwa ukuya ku-40 deg. Ngemuva kwama-frosts okuqala, uma ama-crust amafomu emhlabathini, kubalulekile ukutshala umhlabathi wokutshala ukuze kuvimbele ukushisa kwentwasahlobo, okuvame ukubulala izitshalo ezincane. Izinhlobo eziningi zinomsoco ongavimbela umthunzi kanye nomthunzi. I-Geicher, i-tiarki, ne-geichellae ayidonsa phansi emhlabathini, kodwa bakhetha ukungathathi hlangothi noma okubuthakathaka-umswakama nokucwiliswa kahle. Okukhethwa kukho okungcono kunobumba nomhlabathi nge humus.
Ezindawo ezimanzi ezihlahleni ze-penumbra zikhula ngokushesha. Elanga, izitshalo zidinga ukuchelela okunamandla ezinkathini ezimile. Yonke i-geyhery isabela ngokuthokoza ngokufaka umanyolo ngemifuno eyinkimbinkimbi, isibonelo "iKemira jikelele". Lokhu, ikakhulukazi, kwandisa isikhathi sokuqhakaza.
Lezi zitshalo zisakazwa engxenyeni yesibili yehlobo ngokuhlukaniswa kwama-rhizomes kanye nokuqothulwa kwe-cutal-rosettes, okusheshayo inikeze izimpande enhlabathini enobuthi. Izinhlobonhlobo ze-tiarok ne-geichellae zakha amahlumela angaphansi kwe-rosettes.
Ukungafani kwezinhlobo eziningi ze-geicher ne-geichell kuyisidingo sokuhlukaniswa nokuvuselelwa njalo. Ngaphandle kwalokhu, ngokuvamile ngonyaka wesithathu noma wesine iziqu zisekelwe ngokuqinile, amaqabunga aphezulu awanakho ukudla, iziqongo zingabonakali futhi zome, izihlahla "zikhule," futhi ngezinye izikhathi zibonakala zifile. Ezimweni ezinjalo, kubalulekile ukumba yonke isitshalo, unqume izingxenye ezingenhla, ezomisiwe zamahlumela bese ungcwaba i-rhizome enezinso ezincane eziphilayo ukuze zihlanganiswe ngokuphelele nenhlabathi.
Izimpungushe ze-sulcus weevil zidla izimpande ezicashile zokusondeza kwe-geicher, ezingabangela ukuphakama kwesitshalo ukuze kume.
Amabhungane anombala omnyama, ama-8-10 mm ubude, anezimpande ezijulile e-elytra, edla ebusuku, ehlaba amahlamvu emaphethelweni, futhi efihla enhlabathini emini. Amagundane amhlophe-amhlophe, enenhloko ensundu. Ukuze silwe ezindaweni ezincane, izimbali zinconywa ukuba ziqoqe ngesandla ngaphambi kokubeka amaqanda. Emhlabathini ovulekile, lokhu kwenzeka kanye ngonyaka ngonyaka kaJulayi-Agasti. Ngaphezu kwalokho, lapho uthenga izitshalo ngesistimu yezimpande ezivaliwe, kudingekile ukuthi ugeze izimpande ngokuphelele futhi kungenjalo ungasebenzisa i-substrate ebumbene.
I-Geicher ne-geichella ingathinteka ngama-bacches (amabala asundu emaqabunga) futhi ezimweni ezinzima - izifo ze-fungal (amaqabunga amancane akhanyiswa). Ezindaweni ezivulekile kakhulu, amaqabunga angase ahlupheke ngokushisa kwelanga: kulesi simo, izindawo ezingavamile ezingenalutho zivela.
I-Tiarki iningi elingenakuzithoba futhi elula emasikweni, ingahlala endaweni eyodwa iminyaka eminingana, ngoba ihlumela elisha lenziwa ngaphansi komhlaba kanye nezihlahla zikhula ngokubanzi.
Indawo enhle engadini
I-Geicher, i-geichella ne-tiarki isetshenziselwa ukuhlwanyela kweqembu nokuxuba emibhede yemifula yangaphambili, ikakhulukazi okucacile - njenge-solitaires. Izinhlobo ezihlukahlukene ezimhlophe nezibomvu ze-geicher ne-geichelles ziyavumelana nama-silvery namaqabunga ahlaza okwesibhakabhaka ama-medinits, ama-brunner, ama-fern kanye nama-host, ahluke ngokuphumelelayo nehlobo legolide le-meadow tea (Lisymachia nummularia Aurea), okusakazwa kwe-boron (iMilium effusum "Aureum"), umlutha ophuzi. Zihlanganiswe ngokugcwele nama-primroses, i-astylba pro-capital, ama-frosts, afanelekile izimo ezifanayo. Izinhlobo ezinama-peduncles amade zihlangene ne-geraniums, utshani obuhlotshaniswayo nezimbali. Ama-geicher namaqabunga amnyama kakhulu abukeka kahle ngaphambili ngaphambili kwezolintshi, i-peach ne-apricot daylilies, i-yarrows. Basebenza njenge-padding emihle yama-roses aphansi nombala omnene.
I-Tiarki ingasetshenziswa njengesiko sekhava eliphansi. Zibukeka zihle kakhulu ngesikhathi sezimbali, zakha amaphepheni aluhlaza ngaphansi kwezihlahla. Lokhu kungenye yezingxenye zakudala zegadidi zehlathi, okusebenza njengengxenye enhle kakhulu entshanini, ngakho-ke kunenkinga emthunzini. Zihlanganiswe kahle ngokubhalwa okuhlukahlukene, ama-hoofs, ama-autumnal astral sprawling, ama-hellebones, i-gorodkami, ama-Fern aphansi nama-host.
Ekwindla, i-geychers kanye ne-tiarkas yenza i-backdrop enhle ye-colchicum, engekho amahlamvu.
U-Anna RUBININA, eMoscow.
Umagazini "Flower" № 10 2007
Kumquat: izitshalo zangaphakathi
Ukuhlakanipha okukhulayo ukhohlwa-mina-hhayi
Ukunakekela i-roses yetiyi
Indlela yokukhetha uhlobo olufanele lwekhukhamba
I-Orchid Vanda: Ukunakekela nokukhula
Izimbali ezingaphandle: nidularium
Izingqungquthela ezihlokweni: Usuku selufikile, Isikhathi sami esithandayo sonyaka, Spring of 45 - for abafundi 5 no 6 amakilasi
Ithegi le-Mate, ukuphulukisa impahla
Izitayela zezemfashini zezinkulungwane zempi
Ingabe ushukela uyingozi empilweni yomuntu?
Isimo sezulu eMoscow ngoDisemba 2017 - Isibikezelo se-hydrometcenter senhloko kanye nesifunda saseMoscow ekuqaleni nasekupheleni kwenyanga